izinkinga obuseduze amadoda ungathandi ukuxoxa, kodwa zama zonke izindlela ongazithatha ukuze uziqede. Esikhathini esingeside esidlule, emakethe uvele okukuvumela ukuthi ngokushesha ukwandisa usayizi umthondo - "Titan Gel". kobufakazi Real mayelana nzima ukuthola, iningi labo eqinisweni izidakamizwa, kuvela ukuthi ezejwayelekile PR Ukuthuthelwa komsebenzi inkampani.
"Titan Gel ': okungukuthi, yini
Ngokusho umenzi, kusho ezimbalwa kuphela amasonto ukusetshenziswa njalo kwandisa besilisa "isithunzi" ukuze 4 ngamasentimitha. Kodwa ingabe kunjalo ngempela? Kuyosisiza kakhulu kubathengi lapha kungaba Izibuyekezo wangempela ukhilimu "Titan Gel", kodwa ukuthola uvivinyo lwangempela kwalo mkhiqizo kunzima ngempela.
Injongo eyinhloko gel obuseduze - ekubuyiseleni libido, okwandisa usayizi umthondo nobude ocansini. On ziqinisekiso umenzi, ke kuyothathwa ephumelela kunazo e nemidanti ocansini.
Ukwahlulela nge amazwana ebhokisini, ukhilimu yenziwe yonke izithako zemvelo. "Titan ijeli" iqukethe Gorjanki, triethanolamine, mithambo ine-elastin futhi ulele, somkhaya,-Peruvian Maca, amaphrotheni hydrolysed. Ziyini lezi izinto empeleni?
Njengoba izindlela yokukhangisa, lesi sitshalo kunomthelela enomopho ku cavernosa corpora, kanjalo ekuthuthukiseni ukwakhiwa. Eqinisweni, ulele eside uba-antibiotic kanye isinqandakuvunda. Nokho, lapho ifaka isicelo isikhumba Izingcupho anda kwegazi, okubangela ukucasuka okuncane.
Isihlobo ezikude iklabishi Russian kanye isithombo kubhekwa a aphrodisiac eqinile. Kodwa ukuze wenze kube ngempela waqala ukusebenza, zidinga ukusetshenziswa kwalo ngaphakathi. Eqinisweni akwaziwa ukuthi bangaki poppy elikhona "Titan Gel". Izibuyekezo Real ngalokhu buthule, nakuba ungathola eningi imibono, baqinisekisa ukuthi ukhilimu usebenza ngempela. Kodwa ngubani kubenza bangabi - kuseyimpicabadala.
Enye igama ingxenye - epimedium. ikhambi elithile lokwelapha ungumthombo izinto ezikwenza nokuqedwa ukungazali besilisa nokuvusa induku. Kuvusa nesifiso, ngesivinini Ukungena ku isikhumba nezinye izingxenye kusho "Titan Gel". Uphenyo Gorjanki ngokuya omuhle njengoba imbiza ubhekwa indlela okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi kungase kutholakale wokugcinwa "amandla wesilisa".
I ikhemikhali sisetshenziswe njengesigungu sokufaka emulsifier. Eqinisweni, it has lutho nge ukwanda inyama zabesilisa. Amanye amasayithi ezinikeza ukuthenga "Titan Gel", ibekwe izikhangiso lapho triethanolamine uba ikhomponethi asebenzayo, ngelula ocansini. Kuyangabazeka ... ikakhulukazi uma ukufunda izincwadi ku-chemistry.
amaprotheni Yemvelo nemphumela Lentulo, kwandisa kanye kuyaqina collagen isikhumba. Into ngokuvumelana incazelo yalo avela emithonjeni ethembekile, ngempela kuqinisa umsebenzi kusho "Titan Gel" ngoba amadoda. Izibuyekezo Real lapha uvumelana entweni eyodwa: amaprotheni kusiza ukubuyisela isikhumba turgor ikhava ilungu, futhi ngenxa yalokho ngcono izinga lempilo ngokobulili.
Enye igama isitshalo - ubisi somkhaya. Ikakhulu lisetshenziswa njengedivaysi ejenti amanxeba, esiza balahle imibimbi. Ngokusho Abelapha, cishe lutho alichaza khona ubisi somkhaya ukulungiswa "Titan Gel". kobufakazi Real ukuthi uqinisekise isitatimende yomdayisi okusolwa ukuthi somkhaya has impahla ukuba zinde ukuhlangana futhi ukwandisa ukukhuthazela amadoda azitholakalanga.
Ukolweni amaprotheni hydrolyzate
It is kancane wabhubhisa amaprotheni ngokushesha digestible. Isenzo oyinhloko ingxenye - kumiswa ifilimu elincanyana phezu izakhi isikhumba ebusweni. Ngenxa wakhe, isikhumba kuba made futhi amandla awo zibukeke ukuxegiselwa. Yini ketshezi elikhona ukhilimu ukwandisa umthondo, akucaci ngokuphelele. Nokho, banikezwe udumo wamaprotheni brand "Titan Gel": Izibuyekezo yangempela elwela tout kakhulu anti-ukuguga umphumela ukhilimu.
Kungenzeka yini ukuba umuntu athole imiphumela limenyezelwe umdayisi?
Njengoba nomkhiqizi umthondo ukukhulisa bungatholakala kuphela ukusebenzisa njalo ukhilimu, futhi kudingeka yokwelapha Yiqiniso benta kahle kakhulu. Umuntu othile usevele ngemuva kokusebenzisa Okokuqala ngaphawula ngcono sobala, futhi othile, futhi ngemuva kokuphothulwa izifundo ezigcwele babengenawo umuzwa ushintsho.
"Titan Gel", ukubuyekezwa okuyinto ngempela impikiswano, amathonya ezahlukene isitho sowesilisa zokuzala. Ngokwe incazelo okubuzwa yokuthengisa, kusho ukusebenza kahle incike izici ngabanye abantu. Okungukuthi, abangabantwana ukhilimu amangalelwe jikelele kungaba kungabaza.
Into kuphela esiqinisekisa inani elandayo labathengi, lokuthi ukhilimu hypoallergenic. Ingasetshenziselwa ku isikhumba ebucayi, ngaphandle kokwesaba ingqondo ukucasuka.
"Titan Gel": uhlamvu omuhle Izibuyekezo
Uma ulihlola ulwazi ekhona izinsiza ngezihloko ezifanele, okuhle ukuthi ungase uphawule abanye mkhuba ezimbi: ukubuyekezwa omubi cishe njalo iwebhusayithi ezikhethekile ukuqaliswa kwe "Titan", njengoba umthetho, entulekayo. Ngiyavuma, kungcono uyinqaba. Cishe, lokhu kungenxa "ugly" icebo ukumaketha ukuheha abathengi ngaphezulu.
Nokho kukhona indlela real - hhayi wathenga - okubuyayo. Iningi "Titan" ukubhala lokhu okulandelayo:
Kuyasiza ukukholelwa bona, ukuze kushintshwe nombono ofanayo nemlingani wakho.
It kwandisa ukuzwela ngesikhathi socansi.
Excellent kuzibonakalisa uwoyela-ijeli.
Kancane, kodwa isikhathi eside socansi (nge-avareji imizuzu 10-15 of)
It kuvimbela ukulimala ngesikhathi ubuhlobo.
It kuvimbela ukwakheka izinqubo ukuvuvukala.
Kuletha micro-imifantu esikhumbeni.
Doesnt ibakhathaze, it has a iphunga hlangothi.
Ngokwemvelo, balindele umphumela kumnandi, abanye abathengi akathandanga ukuba isenzo wangempela ithuluzi ezifana ijeli, "Titan" ngoba amadoda. Izibuyekezo ngomthelela isidakamizwa iduna "isithunzi" abasebenzisi abakhonondayo avunyelwe:
It has nhlobo umphumela: ayikhuphuki noma ngokwezinga anoma yibuphi ubude, ngisho nangemva isicelo 2 Yiqiniso.
Kubangela ukuqubuka silume nezincane.
Wabacasula iguliswa ku intima ngemva umlingani.
It has izindleko ngokungenangqondo okusezingeni eliphezulu.
Yini abacabanga ngale owesifazane
Okuningi umusa wakho naye ekuphileni lady ungalokothi uthi amehlo wakhe kangangokuthi wayeshiseka embhedeni - zero ephelele, futhi ngaphandle kakhulu "nduku." Izindaba eziningi okwethulwa emakhasini ezitolo inthanethi, ngisho ukude zifane izimo zangempela. Ezimweni eziningi, ladies thukela babe lover wakhe zimpahla, njengoba ithokheni enjalo ilingana ukuthuka ukuzazisa besilisa.
Nokho, ungakwazi ukuhlangabezana futhi izimpendulo zesifazane, ubufakazi mayelana nokusebenza kahle "Titan Gel". Izibuyekezo Real ikhasimende (funda - nabafazi abanikazi lucky ukhilimu) zimi kanje:
Ngemva kwesinye isicelo lowesilisa "isithunzi" ungeze kakhulu ukuba umthamo.
Phakathi ukunyakaza ukusondela ngamunye sibi kakhulu.
Umyeni sasondelana, hhayi kuphela emibhedeni, kodwa futhi ekuphileni kwansuku zonke (isici luyingxenye ngokwengqondo).
Ubuhlobo olusha, buqine ngaphezu kwensimbi.
Phakathi izici ezingezinhle, nahlulele by ukubuyekezwa, kuyafaneleka izindleko eziphakeme izidakamizwa, izithembiso engenabulungisa kamakhi kanye nokungahambisani umphumela izimpahla amangalelwe abezindaba ukukhangisa.
Abathengi abaningi belulekwa ukusebenzisa "Titan", kanye namasu massage and iqoqo izivivinyo - kuphela kulesi simo kungenzeka ukufeza imiphumela engcono kakhulu. Akufanele babe amathemba eziphakeme ukhilimu, njengoba ukusetshenziswa kwayo ngabanye ngokuvamile abakwazi futhi ukwandisa umthondo 4 amasentimitha noma ngaphezulu. Nokho, nahlulele by ukubuyekezwa, "Titan" kuyinto ekahle ukusetshenziswa uwoyela (igrisi), elikhishiwe kwezinye izinguqulo isakhiwo isikhumba umthondo, amadoda futhi asenze mucosa sowesifazane sangasese umlingani wakhe.
Kufanele uthenga "Titan Gel"
Ukuthenga noma cha izimpahla kwalesi sigaba - engathí zomuntu siqu. Kodwa ngaphambi ukubhuka ijeli "Titan" ngoba amadoda libuyekeza ngakho kanye nokusebenzisa kwayo kufanele kubhekwe ngokuningiliziwe (kungani ukuthenga ingulube in a xhoxha, akunjalo?), Futhi siqiniseke ukuthi azikho ukungabekezelelani ngabanye kwezingxenye ukhilimu wena nomlingani wakho. Futhi elinye iphuzu elibaluleke. Kufanele kube ukuthenga niqaphelisise "Titan Gel": emasayithini wosuku olulodwa kwalo mkhiqizo ayikwazi igcwaliseke. Uma uqaphela lezi zikhangiso, uyazi - I-lawa imikhonyovu.
Nokushintsha kokudla nokufakwa, izici nezilinganiso "Bebikalm" - belungiselela izinsana kusukela colic besisu
"Lozap": yokusetshenziswa ngokuningiliziwe
Yiziphi sikufisela inhlanhla ebhokisini "Varfeys"
Kungani gorchat ukhukhamba nokuthi ukuze ngikuvimbele?
Wellberg izitsha: ikakhulukazi ukusetshenziswa kanye nezinzuzo
Kuyini ukulwela: umlando nezinhlobonhlobo
Yoga ebusweni ikhuthaza isikhumba rejuvenation
Inkantini saseNevsky: Ukubukezwa
Iqhaza main kwesibindi emzimbeni womuntu. isifo sesibindi, ukuxilongwa kanye nokuvimbela